Xaaskiisii Oo Uu Ku Andacoonayo In Ay Ubad U Dhali Weyday Ayaa Uu Ku Beddeshay Ri’ Iyo 3 Waxarood – Geeska Afrika Newspaper | Hargeisa, Somaliland
Xaaskiisii Oo Uu Ku Andacoonayo In Ay Ubad U Dhali Weyday Ayaa Uu Ku Beddeshay Ri’ Iyo 3 Waxarood
Published on May 25 2014 // Googooska Geeska
Sofia (Geeska)- Qiso yaab badan iyo sheeko aan hore u dhicin oo muran iyo dood ka dhex dhalisay muwaadiniinta dalka Bulgaria ayaa ay noqotay markii la ogaaday in nin u dhashay dalkaasi uu xaaskiisii ku beddeshay dhowr neef oo adhi ah. Dadka qaar ayaa dhacdadan u arkay wax lagu qoslo iyo sheeko lagu maadsado, qaar kale ayaa ku gaabsaday Balaayo aan kaa qoslin balaayoba maaha. Jilaaga qisadan yaabka badani waa Beer-Wale isla markaana ka ganacsada iibka xoolaha oo u dhashay dalka Bulgaria.
Ninkan oo lagu magacaabo Stuwil Banaitov waxa uu hore u guursaday saddex dumar ah, laakiin wax ubad ah ma’ uu dhalin. Maalin maalmaha ka mid ah ayaa isaga la fadhiya nin ay saaxiib ahaayeen, oo ay muddo ku dhex haasaawayeen beertiisa oo ku xigtay beerta Baniatov, ayaa uu aad uga calaacalay mishkiladda ubad la'aanta ah ee haysata. Ninkii beeraleyda ahaa markii uu arkay heerka quusta ah ee uu Banaitov ka taagan yahay xaaskiisa oo uu ku andacoonayey in ay sabab u tahay ubad la’aantiisa, ayaa uu ninkii ay deriska ahaayeen oo show muddo dusha ka caashaqsanaa xaaskiisu fursaddan ka faa’idaystay. Waxa uu aad u ammaanay xaaskiisa uu ka cabanayo, waxa aanu si cad ugu sheegay inuu xiiseeyo gabadhan, kana codsanayo in haddii uu quustaa taagan yahay uu isaga uga tanaasulo xaaskiisan uu ka cabanayo, isaga oo weliba u sheegay in taasi ay u noqon doonto fursad uu ku raadsado xaas kale oo uu ku tijaabiyo nasiibkiisa dhalmada ubadka, maadaama oo aanu sharciga dalku u ogolaanayn laba xaas in uu mar wada qabo.
Bainatov oo sida muuqata aan guur dambe diyaar u ahaynayaan wax cadho ama dareen xun ah kama uu bixin dalabka saaxiibkii ee ah inuu uga tanaasulo xaaskiisa, laakiin waxa uu si fudud uga dalbaday inuu uga tanaasulayo haddii beddelkeeda uu wax ku helayo. Ninkii oo uu damac galay ayaa Bainatov weydiiyey waxa uu ku beddelen lahaa, laakiin waxa yaab ku noqotay markii uu sheegay inuu uga tanaasuli doono xaaskiisa haddii uu siiyo ri' taran fiicnayd oo uu lahaa muddo dheer, Ri'dan oo markaas uun dhashay Saddex neef oo yaryar, kadib hadba wixii ay dhalaan ayaa aan korsan doonaa. Bainatov oo arrintan wax laga weydiiyey ayaa yidhi, "Waan garanayaa inuu saaxiibkay iga faa'iday waayo gabadh aad u qurux badan ayaa uu siistay Ri' iyo saddex waxarood" laakiin waxa uu Bainatov dhankiisa sheegay in qudhiisu aanu khasaare taagnayn farxad badanna uu dareemayo waayo buu yidhi, korintan saddexda neef ee ay wadato ridani ayaanu u niyoon doonaa kana dhigan doonaa ubad aan isku illowsiiyo goblanka, maadaama oo saddex dumara oo aan guursaday waxba ii dhali waayeena dumar dambe dan kama lihi.